၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Dutchtown Proud • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown ဂုဏ်ယူ
အပေါ် Posted ဧပြီလ 4th, 2021
မင်းနေတုန်းပဲ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်လား မင်းဖြစ်သင့်တယ် တစ်နိုင်ငံလုံးအကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရသည့်တိုင်ဒတ်ခ်ျတောင်းအိမ်နီးချင်းများကအတူတကွစုရုံးကာတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းဆက်လက်တိုးတက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဂုဏ်ယူသင့်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူတကွနားလည်မှုကိုသရုပ်ပြလိုသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ဖြန့်ဝေခဲ့တယ် Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် name- သင့် - စျေးနှုန်းလဲလှယ်အတွက်ခြံနိမိတ်လက္ခဏာ DT2 • Downtown Dutchtown သို့လှူဒါန်းခြင်း။ Dutchtown တစ်ခွင်တွင်ဆိုင်းဘုတ် ၂၀၀ ခန့်ဖြန့်ဝေထားသောကင်ပိန်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်၏ Dutchtown ဂုဏ်ယူသောသင်္ကေတကိုမှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Dutchtown Proud ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်နီးချင်းများအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားနေသည် သူတို့ရဲ့လုပ်ကွက်စုစည်း, လမ်းများကိုရှင်းလင်းပါ, ကော်မတီများတွင်ပါဝင်ရန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ပါနှင့် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်းတို့ကိုပြသပါ။ လူတိုင်းကိုအသိပေးပါရစေ။
သင်၏ Dutchtown ဂုဏ်ယူဖွယ်အမှတ်အသားကိုရယူပါ။
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောသဘောတူညီမှုကိုကမ်းလှမ်းသည်။နိမိတ်လက္ခဏာကိုမှာထား, သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအမည်, ငါတို့သည်သင်တ ဦး တည်း (သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ဆယ်) ကိုချွတ်လာကြလိမ့်မည်!
ကျနော်တို့တစ်ဝှမ်း $ 15 တစ်အလှူငွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး စီကို ၅ ဒေါ်လာလောက်အကုန်အကျခံတယ် ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ် ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကြံ့ခိုင်အောင်ကူညီဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုကဆိုင်းဘုတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုသောမည်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုမဆိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည် DT2 လူတိုင်းအတွက်ထူးခြား။ မတူကွဲပြားသော၊ တိုးတက်သော Dutchtown တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်။
အခု ၁၅ ဒေါ်လာမတတ်နိုင်လား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ငါတို့ကမင်းကိုတောင်တစ်ပြားတောင်ပေးမပေးဘူး။ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားကြည့်ပါ၊ သင်၏စျေးနှုန်းကို ၀ ဒေါ်လာဖြင့်ထည့်ပါ။ အခြားအိမ်နီးချင်းတစ် ဦး ကသူတို့၏ Dutchtown ဂုဏ်ယူမှုကိုပြသနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်နေ ဦး မည်။
အလှူရှင်များအားတည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အခမဲ့ Dutchtown ဂုဏ်ယူသောနိမိတ်လက္ခဏာ
၂၀၂၁ အတွက်အသစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown Proud သင်္ကေတများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသူဖြစ်လာသူအားပေးနေသည် DT2 မှအလှူရှင်ထောက်ပံ့။ သင်၏လစဉ်ထပ်တလဲလဲဖြစ်သောလှူဒါန်းမှုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ဘယ်ကိုချန်ထားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မည်သည့်အလှူငွေမဆို - ဒေါ်လာ ၅၊ ၁၀၊ ၂၅ သို့မဟုတ်တစ်လဒေါ်လာ ၅၀ - DT5 သည် ၂၀၂၁ နှင့် ၂၀၀၀ ကျော်နောက်ပိုင်းစီစဉ်ထားသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ငန်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအလှူငွေများဆက်လက်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နီးပါးကတိသစ္စာပြုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သွားစရာလမ်းကြောင်းများစွာကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းသင့်ကိုထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိရန်သင်ကူညီနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆိုင်းဘုတ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးနောက်, အားလုံးရရှိသောသွားပါ DT2 • Downtown Dutchtown, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 501 (ဂ) (3) ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအကျိုးအမြတ်။ DT2 ၏မစ်ရှင်သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သာယာဝပြောမှုမျှဝေခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤမစ်ရှင်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ နေရာများ၊ နေရာများနှင့်မျက်နှာများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နေထိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
DT2005 သည်အိမ်နီးချင်းစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူစီးပွါးရေးဘတ်ဂျက်ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ မှာပထမဆုံးအချိန်ပိုင်း ၀ န်ထမ်းကိုငှားရမ်းနိုင်ခဲ့တယ်၊ Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာဂျက်စီကာ Payne။ ဂျက်စီကာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပတ် ၀ န်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံများကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးသူမ၏စွမ်းရည်များသည်ရန်ပုံငွေများရရှိရန်၊ ထောက်ပံ့ငွေများရရှိရန်၊ စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန်နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
DT2 မကြာသေးမီကနှင့်အတူပူးပေါင်း မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် UrbanMain ပရိုဂရမ်, မစ်ဆူရီအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကို။ Main Street ၏လေးမှတ်ချဉ်းကပ်မှုအရ DT2 သည်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် ကော်မတီများ Dutchtown ၏အနာဂတ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာစီစဉ်ရန်အနီးအနားမှသက်ဆိုင်သူများက ဦး ဆောင်သည်။ အဆိုပါကော်မတီများကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နေကြသည် ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေး, စီးပွားရေးအထောက်အပံ့အစီအစဉ်များနှင့် activate ရန်လှုပ်ရှားမှုများ Marquette ပန်းခြံ.
လူကိုယ်တိုင်ပုံမှန်စုရုံးရန်စွမ်းရည်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းလွန်ခဲ့သည့်နှစ်က DT2 နှင့်လူထုကြားတွင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရှိခဲ့သည်။ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအသစ်များ၊ လူသစ်များနှင့်နှစ်ရှည်လများနေထိုင်သူများနှင့်အသစ်တည်ထောင်ပြီးစီးဆင်းနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Dutchtown ကိုရှေ့သို့ချီတက်ရန်အတူတကွပူးပေါင်းနေကြသည်။ Dutchtown ဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အရှိန်အဟုန်ရှိတယ်။
Dutchtown ကို ဆက်၍ တည်ဆောက်ပါ - ယနေ့သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာရယူပါ။
သင်ကရပ်ကွက်မှာအသစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုကို Dutchtown Proud သင်္ကေတဖြင့်ပြပါ! Dutchtown မှာတိုးတက်လာတဲ့လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမင်းကိုမကြာသေးမီကမှခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်၊ Dutchtown Proud သင်္ကေတဖြင့်ထိုစိတ်ဓာတ်ကိုပြပါ! သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာသည်ဆောင်းကာလ၌သွေ့ခြောက်လျှင်၊ Dutchtown Proud သင်္ကေတအသစ်တစ်ခုရယူပါ! မင်းရဲ့ဘလောက်မှာစည်းလုံးမှုကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်၊ Dutchtown Proud သင်္ကေတအနည်းငယ်ရယူပြီးသင်၏အိမ်နီးချင်းများကိုမျှဝေပါ!
အောက်မှာ Filed DT2. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်နှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 4th, 2021 .
ဒိန်းမတ် DT2 2021 ခုနှစ်တွင် Dutchtown ဂုဏ်ယူ